राती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जस्ले कल्पना पनि गरिनन् यस्तो होला भन्ने ! (भिडियो) – News452Online
राती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जस्ले कल्पना पनि गरिनन् यस्तो होला भन्ने ! (भिडियो)
Posted byadmin	 February 7, 2021 Leaveacomment on राती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जस्ले कल्पना पनि गरिनन् यस्तो होला भन्ने ! (भिडियो)
एक १९ वर्षकी कि’शोरीले दा’वी गरेकी छिन् कि जब उनी रा’तमा एक यु’वकको कोठामा गइन् त्यही बेला अ’चानक युवकका अन्य ११ जना साथीहरु आए र सबैले क’रणी गरे । घ’टना साइप्रसको हो,जहाँ बे’लायती क’शोरी एक सस्तो रिसोर्टमा बसेकी थिइन् । कि’शोरीले आफू एक युवकसँग को’ठामा भएको स्वीकार गरेकी छिन् । कि’शोरीको उ’जुरीपछि सबै १२ जना यु’वक वि’रुद्ध क’रणीको मु’द्दा च’लाइएको छ।आ’रोपी सबै यु’वकहरु इजरायलका हुन् । कि’शोरी का अनुसार ती युवकहरुले उनी बे’होस भएपछि मात्र छो’डेका थिए । कि’शोरीको श’रीरमा चो’टका कैयौं नि’शान पाइएका छन् । **थप समाचारको लागि भिडियो हेर्नुस***
यो अवस्य पढ्नुहोस्: स्मितालाई भगाउने जनकपुरका नारायण यादव के गर्दैछन्?
स्मीता बोल्नै सकिनन् भने राहुलको आँखा भरिएर आयो, गला अवरुद्ध भयो । तनहुका राहुल गुरुगं इन्डियन लाहुरे र सानी छोरीलाई छोडेर हिडेकी स्मीता काठमाडौको होटलमा जनकपुरका नारायण यादवसंग भेटिएकी थिइन् । श्रीमानले आफुले कहिल्यै मोबाइल चेक नगर्ने बताएका छन् । मैले श्रीमतीलाई कहिल्यै संका गरिन बिश्वास गर्दा अहिले घर न घाटको भएको बताएका छन् । **थप समाचारको लागि भिडियो हेर्नुस***
Posted byadmin February 7, 2021 Posted inrochak